Ndị editọ foto kachasị mma n'ịntanetị | Akụkọ akụrụngwa
Oge ụfọdụ anyị enweghị ike ma ọ bụ achọghị ịwụnye sọftụwia ọzọ na kọmputa, ọkachasị ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ ime bụ naanị otu ugboro ka anyị na-eme ya. O nwekwara ike ịbụ na anyị nwere kọmpụta nwere obere nchekwa na, n'ọnọdụ ndị a, ihe kachasị mma nwere ike ịbụ na anyị na-achọ nhọrọ iji mee ya site na ihe nchọgharị anyị site na .ntanetị. Ihe nwere ike izute n'elu chọrọ maka ụfọdụ ndị ọrụ bụ weebụsaịtị na-ebu editọ foto na ntanetị na n'ezie mma ma ọ bụrụ na ndị a editọ bụ kpam kpam n'efu, Kpochapụ.
Ọzọ anyị ga-etinye gị ndepụta nke ndị editọ foto ntanetị. Ndepụta ahụ, dịka ọ na-adị na nke ndị a, etinyeghị n'usoro ọ bụla gafere eziokwu ahụ bụ na onye ndezi ntanetị nke mbụ bụ nke m chere kacha mma. N'ime ndepụta ahụ ị ga-ahụ ndị editọ zuru oke karịa ndị ọzọ, mana ọ dị mma ịnweta ha ebe, ebe ọ bụ na ụfọdụ dị mfe na ngwa ngwa iji karịa ndị ọzọ zuru ezu, mana nke ọ ga-ewe ogologo oge iji dezie foto anyị. M na-ahapụrụ gị ndepụta ahụ.
3 Nchịkọta Ihe Ntanetị N'ịntanetị
PixLr bụ, ikekwe, nchịkọta akụkọ zuru oke. Ọ bụ ihe kachasị Yiri onye nhazi desktọọpụ na ị ga - ahụ ma ọ dị ka Photoshop. O nwere ihe niile anyi nwere ike ichota na ederede ihe oyiyi, dika ihe nzacha, akwa na, bia, ihe niile. O nwere menu n’elu, yabụ na anyị ga - achọpụta naanị na anyị nọ na ngwa ọrụ weebụ maka na anyị na - eme ya site na ihe nchọgharị ahụ. 100% nwere ike ikwu.
Phixr bụ ezigbo nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ nke anyị nwere ike iji melite foto site na ịgbakwunye ụdị nzacha na ụdị ngwaọrụ ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịgbanwe agba, ọkụ, tinye sandwiches na ogologo ogologo, pikselụ na mgbanwe niile. Na mgbakwunye, ọ na-arụ ọrụ na-enweghị iji Flash Player, ihe ọ dị m ka ọ dị m mma ịtụle ihe egwu dị na teknụzụ Adobe a, na ọbụlagodi ha kwadoro iwepu ya.
Ozugbo mbipụta a mechara, anyị nwere ike itinye ọnọdụ metadata, họrọ usoro nke anyị ga-echekwa ya, kesaa ya na netwọkụ mmekọrịta dị iche ma ọ bụ zipụ onyonyo ahụ site na email. Dịka ị pụrụ ịhụ, Phixr nwere ihe niile, ọ bụ ezie na ọ bụkwa eziokwu na anyị kwesịrị ịmụ obere tupu anyị enwee ike ịpịa ya 100%. Ka o sina dị, ngwa ntinye ederede niile na-amanye anyị ịmụtakwu, yabụ Phixr adịghị iche na nke ahụ.
Nchịkọta Ihe Ntanetị N'ịntanetị
Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ nchịkọta akụkọ ntanetị n'ịntanetị nke na-enye gị ohere ịgbakwunye nzacha ngwa ngwa na ngwa ngwa, Free Online Photo Editor nwere ike ịmasị gị. Dị ka Phixr, ọ chọghị Flash Player, ọ bụ ya mere m ji kwuo banyere ndị editọ a tupu. Ọ bụghị ụdị dịgasị iche ma ọ bụ nwee ọtụtụ nhọrọ dịka Phixr, mana ọ na-enye anyị ohere itinye ọtụtụ nhọrọ nke ahụ ga-enyere anyị aka Bugharia, tụgharịa, ịkpụ, wdg, melite, tinye mgbanwe agba, tinye okpokolo agba, nzacha, mmetụta na ụfọdụ ọnụọgụ, dịka anụmanụ, akụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ihe kachasị mma banyere onye editọ a bụ ịdị mfe nke iji ya na otu anyị nwere ike isi dezie onyogho ndị ahụ.
pho.to bụ ihe nchịkọta akụkọ foto nke otu nwanne m nwoke tụrụ m aro. Nwere ike idezi foto site na iji ọtụtụ nhọrọ, rụọ ido ihu ma ọ bụ tinye nsonaazụ dị ụtọ, dị ka nke m hụrụ nke nwanne nwunye nwanne m kewara na ọkara ma nwee ọbịa n'ime ya. Ọ bụ nchịkọta akụkọ a na - atụ aro ma na - atụ aro ya, mana ọ na - ahapụ akara mmiri ahụ, akara anyị nwere ike wepu ma ọ bụrụ na anyị ga - ewepụta ihe oyiyi ahụ.
piZap bụ onye nchịkọta akụkọ ntanetị nke ga - enyere anyị aka ịgbanwe foto site na ịkpụ ha, na-agbakwunye nzacha, akwụkwọ mmado, ederede, okpokolo agba, eserese, ime Memes na ọbụna ịgbakwunye foto ọzọ. Ọ ga-enye anyị ohere ịbịgharịa ma gbanwee nchapụta, agba, saturation na iche. N'aka nke ọzọ, anyị nwekwara nhọrọ Collage na Design. piZap bụ n'efu, mana nwere Pro nhọrọ nke ahụ ga - enyere anyị aka ịchekwa onyonyo jiri ogo dị elu ma kpochapụ mgbasa ozi.
FotoFlexer bụ nchịkọta akụkọ dị mfe iji, dị ka ọtụtụ ngwa nke ụdị a dị na ụlọ ahịa ngwa mkpanaka. Anyị nwere ike ịmezi ya na akpaghị aka, wepụ anya uhie, kụrụ ihe, megharia, gbanwee ma tụgharịa.Anyị nwekwara taabụ ịgbakwunye nzacha, ọzọ iji tinye ederede, wdg. Nhọrọ mara mma bụ na anyị nwere ike itinye ihe onyonyo na-akpụ akpụ, dịka kpakpando, obi na anụmanụ. N'aka nke ọzọ, ọ dịkwa ike deform ihe oyiyi. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ nwere ọtụtụ nhọrọ, ya mere ọ bara uru itinye ya na akaụntụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ihe ndezi ederede ntanetị kacha mma n'ịntanetị
Ndị a bụ 5 nke kacha mma eReaders na ahịa